16/02/2011 : Manandafy Rakotonirina : « tsy asiako lanjany ny tenin’olona tsy mahazaka fanjakana » (+vidéo)
Omaly dia niseho tamin’ny haino amanjery ny vice-amiral Hyppolite Ramaroson ary nanambara fa « hosamborina sy hatao fanadihadiana » ny Filoha RAVALOMANANA rehefa tafaverina. Manoloana izany dia nambaran’ny Filoha Nasionalin’ny antoko MFM izay mpitari-tolona ao amin’ny ankolafy RAVALOMANANA ihany koa fa « tsy dia misy dikany loatra ny tenin’ny olona efa nomena fahefana nefa tsy mahazaka ka namindra izany tamin’ny mpanongam-panjakana ».
Tsy matahotra izay fampihorohoroana ny ankolafy RAVALOMANANA raha ny nambarany ary « hohita eo izay hataon-dry zalahy fa tsy hiafina akory ny filoha RAVALOMANANA ». Mahakasika ny fiverenan’ny Filoham-pirenena an-tanindrazana izay dia nambaran’i Manandafy fa « efa mikorontana ny firenena amin’izao fotoana ka tsy hanakorontana mihitsy ny fahatongavany fa vao maika hametraka ny filaminana sy fahatoniana ara-politika ». Raha ny filazan’ny filohan’ny MFM dia tsy manana fiarovana manokana ny Filoha RAVALOMANANA ary efa nanontaniana momba izany ny tenany dia nanambara fa « ankiniko amin’Andriamanitra ny aiko ».
28/01/2011 : Filohan’ny FFKM : efa fifonana am-pahibemaso ireny "révélations" nataon'i Lt Col Charles ireny(+Vidéos)
Nikasa ny hitsidika sy hampahery an’ireo manamboninahitra migadra eny Tsiafahy ny Filohan’ny FFKM sady Filohan’ny FJKM ny Pastera Lala Haja Rasendrahasina. Araky ny fampitam-baovao nataony dia tsy afaka nanatanteraka izany ny Pastera Rasendrahasina “noho ny fandaminana amin’ny famangiana” hoy ireo mpiandry ny fonja. Raha ny nambaran’ity olon’ny fiangonana ity dia ilain’ny voafonja izany noho ny zavatra mihatra aminy. Ny Lt-Col. Charles Andrianasoavina no saika notsidihan’ny Filohan’ny FFKM manokana noho ny toe-javatra mampifandray azy ireo tamin’ny andron’ny 17 Martsa 2009. Ny ampamoaka nataon’ity manamboninahitra ity manko dia toy ny fanekena ny heloka vita sy fibebahana sahady hoan’ny Pastera Lala Rasendrahasina. “Tsy hanao fanambarana goavana anefa aho hoe mamela ny hadisoany” hoy ihany ny Filohan’ny FJKM “fa aleo ny voa no hanambara ny hazo”.
NItsidika azy telo mirahalahy voafonja ao Ambatolampy ihany koa ny Filohan’ny FFKM. Tontosa soa aman-tsara, araky ny filazany, ny fankaherezana azy ireo tamin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra ary tsapa fa mila izany izy ireo. Indrindra taorian’ny fanemorana indray ny fotoam-pitsarana azy ho amin’ny 08 Febroary hoavy izao indray. Tsara ny mampahatsiahy fa hatramin’ny 11 Novambra 2010 no any am-ponja Fetison Rakoto Andrianirina, Zafilahy Stanislas ary ny Pastera Edouard Tsarahame.
Mikasika ny raharaham-pirenena dia nambaran’ny Pastera Rasendrahasina fa rehefa mahatsapa ny tsirairay fa tompon’andraikitra eto amin’ny Firenena dia hivaha ny olana eto amintsika. Nanteriny ny antson’ny FFKM amin’ny fifantohana amin’ny ara-panahy mb aahatsapan’ny isam-batan’olona ny adidiny amin’ny tanindrazana fa tsy hametrahany kajikajy lava amin’ny fiainana politikan’I Madagasikara.
24/01/2011 : Mamy Rakotoarivelo : “avoahy aloha ireo gadra politika rehetra …” (+vidéo)
Manoloana ny fiakaran’ireo mpitari-tolona telo mirahalahy fitsarana rahampitso dia nampita hafatra sy antso tamin’ny anaran’ny TIM sy ny ankolafy RAVALOMANANA I Mamy Rakotoarivelo. “Efa ela no nitakianay ny hamoahana tsy misy fepetra ireo gadra politika rehetra “ hoy ny Sekretera jeneralin’ny TIM “ary tsy mbola miova hevitra izahay fa manantitra fa vahaolana fototra izany mba isian’ny fitoniana politika sy sosialy eto amin’ny firenena”. Fepetra fototra apetraky ny ankolafy RAVALOMANANA moa izany fitoniana izany ankoatry ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc an-tanindrazana ka ahafahany milatsaka hofidiana indray hanohy ny asa fampandrosoana an’I Madagasikara.
24/01/2011 : TIM – UDR – TGV : miato tanteraka ny fifampiresahana (+vidéo)
Raha ny nambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny antoko Tiako I Madagasikara dia tsy mbola misy tohiny ny fifampidinihana nataon’izy ireo sy ny UDR ary ny antoko TGV. “Vita ny fandraketana an-tsoratra izany fifampiresahana izany ary efa samy nomena azy mianaka lehiben’ny ankolafy” hoy Mamy Rakotoarivelo “saingy tsy mbola misy tohiny izany no sady nifanojo tamin’ny fandalobvan’ny iraka avy amin’ny mpanelanelana iraisam-pirenena”.
20/01/2011 : Jean-Louis Rakotoamboa : “ala-nenina farany ny fifampidinihana amin’ny samy mpanao politika” (+vidéo)
Araky ny fahitan’ny Filoha Nasionalin’ny TEZA dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana arahina fifamelana an-kitsim-po no ahafahana mamaha ny krizy eto amin’ny firenena. “Rehefa miresak anefa dia tokony tena manana finiavana” hoy izy “fa tsy manao kobay an-kelika ihany”. Nambarany ihany koa fa efa tonga eo amin’ny ala-nenina farany ny ankolafy RAVALOMANANA matoa nisy ny fenekena hihaona amin’ireo hery politika samihafa eto amin’ny firenena.
30/11/2010 - Tsy voavidy vola ny Filoha RAVALOMANANA Marc (+vidéo)
Raha ny fahitan’ny ao amin’ny Madagasikara Firaisankina dia teti-dratsin’ny Frantsay ihany ny fanambazana vola ny Filoha RAVALOMANANA Marc mba tsy handraisany anjara amin’ny raharaham-pirenena. Tsy atahorana hiozongozona noho izany anefa ny Filoham-pirenena satria fatra-panaja ny fenitra demokratika ary tena tia tanindrazana.
Ny ankilany kosa dia mizotra mankany amin’ny fahaverezana tanteraka satria miharihary ankehitriny ny hala-bato. Raha ny vokatra vonjimaika nivoaka androany dia mahatratra 52,61% ny salam-pahavitrihana ary nandresy tamin’ny 74,19% ny eny. Lavitry ny fankatoavana iraisam-pirenen anefa izany satria tsy niaraha-nanomana ilay fitsapankevi-bahoaka.
25/10/2010 - Mamitiana Ravelonanosy : “afa-baraka isika Malagasy” (+vidéo)
Momba ny zava-nitranga tamin’ny solotenan’I Madagasikara nandritry ny fihaonana an-tampony faha-13 ny OIF dia nambaran’ny Depioten’Ankazobe fa “Fahafaham-baraka hoan’ny Malagasy rehetra ny zavatra nitranga”. Araky ny fanazavany dia noho ny fanonganam-panjakana nataon’I TGV sy ny mpanaraka azy no nahatonga ity “XIIIème Sommet de l’OIF” ity tsy natao teto Madagasikara. “Latsaka ambany tanteraka eo amin’ny tontolo politika Rajemison Rakotomaharo” hoy Ravelonanosy Mamitiana “satria isan’ny mpamadika ny Filoha RAVALOMANANA Marc izy ary noporofoin’ny zava-nitranga fa lalana tsy manaraka ny ara-dalàna no nosafidiny”.
22/10/2010 - Deputé Hery Raharisaina : « tsy mahita afa-tsy ny eo ambany orony ny ekipan’i TGV » (+vidéo)
Amin’ny depiote Hery dia « fanaovana tsinontsinona ny vahoaka Malagasy ny fitsipahana ny hevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena momba ny fitsapankevi-bahoaka ». Ny firenena rehtra nandalo krizy hoy izy dia tsy maintsy manomboka ny fanarenana amin’ny alalan’ny fampihavanana ary iero firenena ao anatin’ny SADC dia mahafantatra stara ny momba izany fivoahana amin’ny krizy izany. «Hiteraka krizy hafa indray io fifidianana io raha mbola mikiribiby manatanteraka izany ny ireo mitonona fa tompon’ny fahefana » hoy ity solombavam-bahoaka vofidy tao Vohémar ity.
20/10/2010 - Tsy mahatsapa fahalalahana ny Malagasy (+vidéo)
Amin’ny vahoaka Malagasy maro anisa dia tsy malalaka ny eto Madagasikara. Rehefa tsy mifanaraka amin’ny eritreritrin’ny fanjakana ny zava-mitranga hoy izy ireo dia mizaka ny mahamay izay sahy mijoro maneho hevitra momba izany.
20/10/2010 - Mihatra amin’ny fiainana an-davanandro ny krizy (+vidéo)
Miaka-bidy ankehitriny ny vary any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Isan’ny mpamokatra vary izany fairtra izany eto Madagasikara nefa tsy voafehy ny vidiny. Azo inoana fa tsy ho ela dia hitatra manerana ny Nosy izany fiakaran’ny vidin’ny vary izany. Toy ny an’ny menaka izay efa miakatra manodididna ny 400 ariary ankehitriny. Ny fahitan’ireo olontsotra sendra anay dia ity krizy ity mihitsy no tena fositra hoan’ny vahoaka. Efa midona tanteraka amin’ny isam-baravarana izany voka-dratsiny izany ankehitriny. “Tsy zaka intsony ny vidim-piainana” hoy ireo renim-pianakaviana. Ny ankamaroan’ireto farany dia mitaky ny famahana hainagana izao kitroka izao fa tsy mendrika ny Malagasy izao.